"Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo… Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa." Isaia 46:4, 9
Raha nandamina taratasy i Gérard, dia nahita sary iray tany an-tsekoly fahiny. Fitopolo taona lasa izay no nakana azy io teo an-tokotanin’ny sekoly tao an-tanàna. Tokony ho iraika ambin’ny folo na roa ambin’ny folo taona izy, tamin’izany. Toa hitany indray i mompera Marcel teo amin’ny fakantsary angorodaony, misarona lamba mainty, ela fiomanana, hany ka nampitabataba kely ny ankizy.
Izy io zazalahy kely falifaly io, manao pataloha fohy, eo ankavanan’ny mpampianatra. Eo anilany i Fernand, dia i Maurice sy Armand, ireo tsy mahay misaraka…Ary na ny fahafatesana aza, tsy nahasaraka azy roalahy tokoa; samy tsy nisy tafaverina avy tany an’ady izy ireo… Ahoana tokoa moa? amin’ireo zazalahy dimy ambin’ny folo eo amin’ny sary ireo, firy izao no mbola velona ankehitriny? Dimy monja…
Nieritreritra i Gérard. Raha mba izy moa no ho faty manaraka? Raha izany, dia vonona izy ny handeha. Efa enimpolo taona mahery izao izy no nahavaha izany olana izany. Ny Baiboly no efa nanome azy antoka, ary tsy niadiany hevitra mihitsy izany. “Na iza na iza manaiky fa Zanak’Andriamanitra Jesosy, dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy kosa ao amin’Andriamanitra” (1 Jaona 4:15). “Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak’Andriamanitra” (5:1). Ianareo “izay mino ny anaran’ny Zanak’Andriamanitra… manana fiainana mandrakizay ianareo” (5:13).
Ary ireo zazalahy folo efa lasana, izy ireo ve mba samy nitady sy nahita an’i Jesosy Kristy, Ilay Mpamonjy?
Izany fahatsiarovana rehetra izany dia nahatonga azy hahatsapa ny halehiben’ny fahasoavan’Andriamanitra izay niahy azy efa hatramin’izy mbola tanora. Resy lahatra tanteraka izy fa ho ampy azy io fahasoavana io, mandra-pahatapitry ny androny eto an-tany.